QuickTime shilalka video in daalacashada, ama aadan ka ciyaari kara video ah via ciyaaryahan QuickTime, kaliya rakibi QuickTime fur-tago hoos ku qoran. Iyadoo QuickTime fur-tago, waxaad ka heli kartaa QuickTime taageeray qaabab dheeraad ah.
Hel QuickTime koronto-tago inay dar dheeraad ah codec in QuickTime
1. QuickTime koronto-in u Chrome / Firefox / Safari
QuickTime ayaa browser fur-in uu yahay qayb ka mid ah QuickTime ah. Waxay awood u aad u ciyaaro filimada iyo music online in aad Chrome, Firefox, Safari iyo ka badan.
Haddii aad QuickTime bidbidayaan in video loo maqli karo, kaliya ay maraan baaritaan deg deg ah u siiyaa biraawsarkaaga. Sida caadiga ah QuickTime koronto-in u Chrome / Firefox / Safari waxaa firfircoonaan by default. Haddii aan, wax yar ka u dhaqaajiso.
Perian fidiyaa QuickTime taageeray qaabab warbaahinta. Iyada oo ay taasi ka siib-in QuickTime lacag la'aan ah, waxaad ka ciyaari kartaa ku dhawaad ​​kasta oo videos ay ka mid yihiin AVI, DIVX, FLV, MKV iyo in ka badan. Sidoo kale Perian taageertaa SSA iyo SRT, si aad ku raaxaysan karaan filimada in ay version asalka via QuickTime.
Fiiro gaar ah: Perian ma taageeri QuickTime 10.3 ay haatan. Wixii Mac 10.9, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aysan u shaqeeyaan.
Flip4Mac waa qayb keliya QuickTime bixiya QuickTime taageero ka ciyaaro Windows video warbaahinta. Iyada oo ay taasi QuickTime koronto-in, aad ku raaxaysan karaan tayo sare video loo maqli karo qaabab kala duwan oo ku saabsan Mac. The non-taageeray video qaabab by QuickTime sida wmv ama AVI si fudud loo qaadi karo. Ciyaaro Windows filimada aad Mac marna dhibaato ah.
4. Divx ( Windows / Mac ) & Xvid Kooban
Si aynu QuickTime shaqada la code Divx / Xvid, waxaad u baahan tahay in ay ka kooban Divx / Xvid lagu rakibay, si aad u ciyaari karaa Divx iyo Xvid video flawlessly. Haddii ay sidaa tahay aad video Divx cod lahayn, kaliya download qaybaha Divx si ay kuu caawiyaan.
Fiiro gaar ah: Apple ayaa laga saaray shaqeynta ah ee qaar ka mid ah barnaamijyada dhinac saddexaad tan iyo Mac 10.9. Haddii video aan lagu ciyaari karin via QuickTime, isku day kaliya Video Converter Ultimate sida kale QuickTime ah.
5. Xiph QuickTime Qayb
Raadinta a fur-in si xor ah u ciyaaro files OGG la QuickTime? Xiph waxa uu noqon doonaa doorashada ugu fiican ee aad. Tani QuickTime fur-in bixisaa codecs Vorbis codsiga wax QuickTime ku salaysan.
Sida loo Beddelaan MOV in MP3 on Mac (Yosemite ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Hel QuickTime plugin inay Play Video iyo Audio More